Mucjisadii Ciyaaraha: 11 Kulan Iyo 12 Koob - Goolhayihii Ka Yaabiyey Dunida Ee Ciyaar Walba Koobka Ku Guuleystay | Laacib.net
Mucjisadii Ciyaaraha: 11 Kulan Iyo 12 Koob – Goolhayihii Ka Yaabiyey Dunida Ee Ciyaar Walba Koobka Ku Guuleystay
18-11-2018 Abdiwahab A. Abeye Comments Off on Mucjisadii Ciyaaraha: 11 Kulan Iyo 12 Koob – Goolhayihii Ka Yaabiyey Dunida Ee Ciyaar Walba Koobka Ku Guuleystay
Ma rumaysan kartaa in horyaal weyn oo dunida laga qaddariyo uu hal ciyaartoy safto 11 kulan oo kaliya, kaddibna ku guuleysto 12 koob?
Arrintani waxay ka dhacday qaaradda Yurub, gaar ahaan kooxda Benfica ee waddanka Portugal, halkaas oo goolhayeeda saddexaad ee Paulo Lopez loogu caleemo saaray goolhayaha ugu guulaha badan adduunka marka laga eego kulamada uu saftay iyo koobabka uu ku guuleystay.
Goolhayaha reer Portugal ee Paulo Lopez waxa uu bishii July ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaaraha kubadda cagta oo uu kusoo jiray muddo 21 sannadood ah iyadoo ay da’diisu tahay 40 jir, laakiin dhibaatada haysatay ayaa ah in aanu ka noqonin Benfica goolhayaha koowaad oo uu mar walba dookha saddexaad ahaa.
Marka la barbar-dhigo goolhayeyaashii Ingiriiska ahaa sida Robert Green oo Chelsea ka tirsanaa, Ricardh Wrigh oo Manchester City ahaa iyo Lee Grant oo hadda Manchester United doorashada saddexaad u ah, midkoodna kuma riyoon karo inuu gaadho guulaha Lopez oo kale, xattaa waxa aan ku hammiyi karin goolhayeyaal doorashada koowaad ah oo ka ciyaara horyaalada Yurub.
Lopez waxa uu kasoo baxay da’yarta Benfica oo uu u ciyaaray dhallinyarada ka hor intii aanu sannadkii 2002 usoo dallaicin kooxda koowaad, waxaana tobankii sannadood ee ugu horreeyey uu saftay 200 kulan oo uu ka caawiyey naadiyada Trofense iyo Feirense inay kasoo baxaan heerka labaad oo ay usoo dallacaan Primeira Liga.
Sannadkii 2012 iyadoo ay da’diisu tahay 34 sano jir, ayaa uu ku laabtay Benfica oo uu muddo ka maqnaa, hase yeeshee waxa kaydka saddexaad u ahaa goolhayeyaasha Ederson oo Manchester City u ciyaara xilligan, Julio Cesar oo xulka qaranka Brazil iyo Inter Milan magac ku samaysay iyo weliba Jan Oblak oo waqtiga Atletico Madrid ka tirsan.
Goolhayani waxa uu nasiib u yeeshay inuu qayb ka noqdo kooxdii horyaalka Primeira Liga afarta sannadood ee xidhiidhka ah ku guuleysatay ee Benfica sannadihii u dhexeeyey 2014 illaa 2017. Waxa kale oo uu la qaaday Portugese Cup oo sidoo kale loo yaqaano Taca de Portugal, saddex League Cup iyo saddex Supertaca Candido de Oliveira ama Community Shield.
Marka laysku geeyo koobabkan, waxay tiradoodu tahay 12 koob, laakiin waxa cajiib ah inuu ciyaaray 11 kulan oo qaarkood final ahaayeen. Sidaana waxa uu ku noqday goolhayaha ugu guulaha badan marka lays barbar-dhigo safashadiisa iyo koobabka uu hantiyey.
Inkasta oo uu goolhayaha saddexaad ka ahaa Benfica, haddana Lopez oo u warramay BB ayaa waxa uu isku tilmaamay nin u dhashay guusha.